Via Myanmar မွ ျပည္တြင္းအဆင့္ျမင့္ခရီးစဥ္မ်ား | Classified Ad Portal
Home » Business Directory » Via Myanmar မှ ပြည်တွင်းအဆင့်မြင့်ခရီးစဉ်များ
Email Address: viamyanmar.travelagency@gmail.com
Contact Number: 01-566801, 0973133488
Address: Room-401, SH Housing, Thitsar Road, South Okkalar Township, Yangon.
Listed: October 8, 2013 9:59 pm
Via Myanmar မှ ပြည်တွင်းအဆင့်မြင့်ဘုရားဖူး၊ အပန်းဖြေ ခရီးစဉ်များကို ကောင်းမွန်သောဝန်ဆောင်မှုများဖြင့် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးလျှက်ရှိပါသည်။ ကုမ္ပဏီအသင်းအဖွဲ့များ၊ ရုံးအဖွဲ့အစည်းများ၊ မိသားစုများနှင့် အပေါင်းအသင်း မိတ်ဆွေများအတွက် ဈေးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့်
စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးလျှက်ရှိပါသည်။ Hooneymooner များအတွက် သီးသန့် Package များလည်းစီစဉ်ဆောင်ရွက် ပေးနေပါသည်။
(၁) ပုဂံ-ညောင်ဦး-စွယ်တော်လေးဆူ-ပုပ္ပါး (၂ညအိပ် ၃ရက် ခရီးစဉ်)
(၂) မန္တလေး-စစ်ကိုင်း-အမရပူရ (၂ညအိပ် ၃ရက်)
(၃) တောင်ကြီး-အင်းလေး-ပင်တယ-ကလော-ကက္ကူ (၃ညအိပ် ၄ရက်)
(၄) ရန်ကုန်-ချောင်းသာ-ရန်ကုန် (၂ညအိပ် ၃ရက် ခရီးစဉ်)
(၅) ရန်ကုန်-နေပြည်တော်-ရန်ကုန် (နေ့ချင်းပြန် ခရီးစဉ်)
Ad Reference ID: 4665254c9d6a2b1d
Listed by: viamyanmar
Other items listed by viamyanmar
Latest items listed by viamyanmar »
All times are GMT 6.5. The time now is 11:59 am.